Afaka manampy anao hamolavola vokatra azo amboarina sy mifaninana izahay. Ankoatr'izay, afaka nanao prototype haingana sy mahomby isika.
Manana ekipa mpikaroka manokana izahay izay manana fahaizana manokana amin'ny fampandrosoana ny fikolokoloana ny ratra, ny fikolokoloana tarehy ary ny patch transdermal.
Fitsapana ny laboratoara
Hydrocare Tech dia manolotra fanavaozana feno sy serivisy fananganana laboratoara vaovao ho an'ireo orinasam-pitsaboana sy orinasan-tsakafo ho an'ny mpanjifa eran-tany. Ny ekipanay dia miara-miasa amin'ny mpanjifa mandritra ny dingan'ny fampandrosoana iray manontolo mba hitondrana ireo vokatra namboarina ireo avy amin'ny hetaheta mankany amin'ny tsena.
Ny fahaizantsika manamboatra be dia be dia ahitana ny serivisy injeniera CNC, ny fampandrosoana ny bobongolo, ny fanovana ary ny fivoriambe farany. Hydrocare Tech dia afaka manampy amin'ny fitantanana ny lafiny rehetra amin'ny tetikasanao - manomboka amin'ny hevitra voalohany ka hatramin'ny drafitra ankatoavina, manomboka amin'ny vokatra tokana ka hatramin'ny famokarana betsaka, manomboka amin'ny banga fananganana vokatra ka hatramin'ny vokatra mihitsy - ary ny dingana rehetra eo anelanelany.
Mba hahafeno ny fepetra takian'ny andrim-panjakana ofisialy sy ny filan'ny mpanjifa dia mampanantena izahay fa araka ny fepetra takian'ny fenitra momba ny kalitao ankehitriny na ny zavatra takian'ny mpanjifa dia ho tanteraka amin'ny voalohany isika, ankoatr'izay, manohy manaraka sy manome laharam-pahamehana ireo fenitra takiana amin'ny rafitra tsara izahay!
Logistics sy Inventory
Amin'ny maha mpiara-miasa anao hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany, Hydrocare Tech dia manolotra vahaolana logistik isan-karazany izay fanitarana ny orinasanao. Afaka manampy anao izahay hanamboatra ny tahirinao, hitahiry ny vokatrao ary halefa mivantana amin'ny mpanjifanao haingana, mora ary mahomby.